Ungawasusa njani amaphepha kwi-PDF ngezi zixhobo zasimahla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Khawufane ucinge ukuba wenze nje i-pdf umthengi ngohlahlo-lwabiwo mali, ngeprojekthi ... Ngequbuliso akubize ngaphambi kokuyithumela kuye akuxelele ukuba lukhona utshintsho. Oko kuthetha ukuba iphepha elinye okanye amabini ePDF yakho kufuneka isuswe. Kodwa, Ungawasusa njani amaphepha kwiPDF ukuba awunaxwebhu lwantlandlolo?
Oku kunokwenzeka, kwaye ujongene neenketho ezimbini: nokuba uyaluphinda uxwebhu, uchitha iiyure kunye neeyure ukuphinda ukwenze; okanye usebenzise amaphepha okanye iinkqubo ezikunceda ucime iphepha kwiPDF ngaphandle kokwenza enye into kwaye kwimizuzu nje embalwa. Ngaba le ngcamango inomtsalane ngakumbi kuwe? Ewe, qaphela kuba siza kukufundisa ukuba ususa njani amaphepha kwiPDF ngokulula.
1 Kutheni ususa amaphepha kwiPDF?
2 Ungawasusa njani amaphepha kwiPDF
2.2 Isoftware yePDF
2.3 Iphepha lePDF Cima
2.4 Isixhobo sePDill
Kutheni ususa amaphepha kwiPDF?
Ngokwesiqhelo, xa usenza iPDF awuyakhi ngqo kule fomathi kodwa usebenzisa umhleli wokubhaliweyo ukwenza uxwebhu kwaye xa sele lwenziwe, endaweni yokulugcina kwi-doc okanye ulwandiso olufanayo, uyenza ngePDF.
El Ingxaki ngeePDF kukuba kwiikhompyuter ezininzi iinkqubo ezikhoyo kukujonga uxwebhu kuphela, kodwa awukwazi ukuyihlela, ucime iinxalenye, faka imifanekiso okanye, kule meko, susa amaphepha kwiPDF. Kwaye yingxaki leyo.
Xa kufuneka uphinde wenze olo xwebhu, okanye xa kufuneka ulutshintshe, kufuneka ulawule ngokupheleleyo yonke into eyinxalenye yalo, kuba kusenokwenzeka ukuba ususe amaphepha angasasebenziyo, okanye aphelelwe lixesha. .
Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba neenkqubo okanye izixhobo ukusukela, kungenjalo, kwaye ukuba awukhange usebenze kwaye ugcine ikopi kwi-doc okanye efanayo kolo xwebhu, kuya kufuneka uyenze kwakhona ukuqala (okanye usebenzise iPDF ukuya kuguquli lwe-doc. , nokuba abalwenzi uxwebhu).
Ungawasusa njani amaphepha kwiPDF
Ngoku ukuba uyaziqonda izizathu zokuba kutheni kufuneka wazi izixhobo zokususa amaphepha kwiPDF, lixesha lokuba sithethe ngeendlela ezininzi onokuzijonga. Eyona nto ilungileyo yile zama ezinye izisombululo Oko sithetha ngako ukusukela ngale ndlela unokufumana eyona ilungele ukuthanda kwakho okanye leyo ikunika ezona ziphumo zibalaseleyo.
Inketho yokuqala esikunika yona yiAdobe Acrobat. Ewe ayikhululekile kodwa besifuna ukuyibeka kuba inexesha lokulingwa lasimahla, kwaye isenokuba lelona xesha lilungileyo lokuyisebenzisa xa uthe wasilela kwaye awunayo eyokuqala. Ukongeza, sesona sixhobo silungileyo sokusebenza ngePDF kwaye ukuba ungayisebenzisa ukususa amaphepha kwi-PDF ngokulula ngaphandle kokuchukumisa lonke uxwebhu, kubhetele kakhulu.
Ukwenza oku, khuphela inkqubo kwaye wenze uvavanyo lwasimahla. Emva koko, vula inkqubo kwaye uvule ifayile yePDF kwindawo ekuyo.
Thepha kwiphepha elincinane. Iya kuba kwikholamu yasekhohlo kodwa, ukuba ayiveli, cofa i-View-Show / Fihla-ukuKhangela iiPhaneli-zePhepha leeThupha.
Cinezela iqhosha le Ctrl. Ngoku, ngemouse, khetha ukuba ngawaphi amaphepha ofuna ukuwasusa. Ekugqibeleni, phezulu kwipaneli ye-thumbnail, nqakraza Cima.
Kwaye yonke into iyakwenziwa. Kuya kufuneka ugcine uxwebhu kuphela kwaye uya kuba neziphumo ngokususa lawo maphepha.
Nantsi enye inkqubo onokuyisebenzisa ukususa ngokulula amaphepha kwiPDF. Inyaniso, Ayinakucima kuphela amaphepha, kodwa unokuhlela isicatshulwa, usiguqule, usidibanise, sahlule iPDF ... Ke ngoko, sesinye sezixhobo ezipheleleyo ezikhoyo.
Ngoku, gcinani engqondweni ukuba ungayisebenzisa kuphela kwiWindows. Ayifumaneki kwezinye iinkqubo zokusebenza.
Iphepha lePDF Cima
Isixhobo esiya ngqo kwingxaki esijongana nayo, esusa amaphepha kwi-PDF, yile. Susa amaphepha angafunekiyo ngokulula kuba ikubonisa amaphepha kwaye kuya kufuneka ukhethe kuphela ofuna ukuhlehlisa ukuze ususe uxwebhu.
Le inokuba yenye yeenkqubo ezisebenzayo, ngakumbi ukuba kuya kufuneka ucime amaphepha amaninzi kwaye kuya kufuneka ujonge ngaphambili ukuze kungabikho mpazamo kwaye ucime into ongafanelekanga ukuyenza.
Esinye isixhobo sokususa amaphepha kwiPDF yile, engasebenzi kuphela ukucima amaphepha kodwa iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ihlukanise i-PDF. Nokuba ikuvumela yenza amanqaku encwadi kwaye ukhuphe amaphepha kwiifayile ezahlukeneyo (ukuba awufuni kulahlekelwa ngala maphepha oza kuwacima).
Kule meko, ayisiyiyo inkqubo esiza kuthetha ngayo, kodwa iwebhusayithi eya kukunceda ususe amaphepha kwiPDF ngokulula. Ukwenza oku, kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi kwaye ucofe icandelo lokwahlulahlula iPDF, elisika i-pdf.
Uyakudinga layisha uxwebhu lwakho kwiqonga labo (Ukuba ibaluleke kakhulu kwaye iqulethe idatha yabucala, kuya kufuneka usebenzise ezinye iindlela kuba apha uphulukana nolawulo loxwebhu kwaye awazi ukuba kwenzeka ntoni). Nje ukuba unayo, iwebhu iya kukubonelela ngokubonakalayo kuwo onke amaphepha oxwebhu. Ngoku, kufuneka ukhethe amaphepha ofuna ukuwagcina kwaye ushiye lawo uza kuwacima angaphawulwanga. Nje ukuba ugqibile, kuya kufuneka ucofe iSplit PDF! kwaye kwimizuzwana embalwa kuya kuvela iPDF entsha ukuyikhuphela kwaye ujonge ukuba uyenze ngokuchanekileyo.
Ngokungachukumisi iPDF, iziphumo ozikhuphelayo kufuneka zilingane nezentsusa ngaphandle kobukho bamaphepha owacimileyo. Kodwa yonke enye into kufuneka ihlale endaweni enye.
Njengoko ubona, zininzi izixhobo onokuzisebenzisa ukususa amaphepha kwiPDF. Kodwa eyona nto intle, ngakumbi ukuba yenzeka kuwe rhoqo, kukuba, xa ugcina uxwebhu, uyenza zombini kwifomathi yamaxwebhu nakwiPDF. Ngale ndlela uya kuba nakho ukusombulula ingxaki ngokukhawuleza kwaye kwaye uya kuba "nokukhusela" kwinto enokwenzeka kwi-PDF, okanye ukuba ufuna ukwenza utshintsho kwixesha elizayo (elifutshane okanye ixesha elide).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Ungawasusa njani amaphepha kwiPDF ngezi zixhobo zasimahla
IMandalas ifake umbala simahla kwaye ilungele ukukhuphela